काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन ।
डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह हुँदाको फाइल लुकाउन भूमिका खेलेको प्रस्टै देखिएको छ । तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाललाई प्रभु बैंक लिमिटेडले प्राप्त गर्नुअघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्ड को र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा गम्भीर घोटाला भएको उल्लेख गरिएको थियो । ग्रान्ड बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको चिरायु अस्पताललाई कर्जा प्रदान गर्दा सो बैंकले आर्थिक घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सो कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षता तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । अधिकारीले सोसम्बन्धी कारबाहीको फाइल अगाडिसमेत बढाएका थिए । अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट हटेपछि डेपुटी भएका सिवाकोटीले नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । तर, उनी सो समितिको अध्यक्ष भएपछि चिरायु अस्पताललाई कर्जा प्रवाह गरेको विषयमा कारबाही गर्नुपर्नेमा सिवाकोटीले कर्जा फाइल नै लुकाएको बताइन्छ । सिवाकोटीको कार्यकालभरि चिरायु अस्पतालको कर्जा फाइल किन गायब भयो ? यो रहस्यकै विषय बन्न पुगेको छ ।
तर, सिवाकोटी डेपुटी गभर्नर भएदेखि लुकाइएको चिरायु अस्पतालको कर्जा फाइल र कारबाहीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत निकायमा २०७४ सालमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीका सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढे पनि कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
निलम्बनमा परेर अहिले सफाइ पाएका राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य सेवा विभाग पनि पछिल्लो समय सिवाकोटीले नै लिएका थिए । सो विभागअन्तर्गत थुप्रै काम हुने भएका हुँदा उनले श्रेष्ठबाट खोसेर आफूले लिएका थिए । सो विभागले २०७२ सालको भूकम्पपछि भत्किएको राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथलीस्थित राणाकालीन दरबारमा नयाँ भवन बनाउन ७ अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बालुवाटारको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणको ठेक्काको जिम्मा २ अर्ब १० करोडमा बनाउने गरी समानान्तर जेभीलाई प¥यो । ठेक्का सम्झौताबमोजिम सो निर्माण कम्पनीले पुरानो चर्चेको क्षेत्रफलमा रहनेगरी सोही नापनक्साबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने र बाँकी रहेका कार्यालय भवनहरू यथास्थानमा राख्नुपर्नेमा कार्यालय सञ्चालनको रहेको विभिन्न नौवटा भवनहरू बिना टेन्डर प्रतिस्पर्धा नै नगराई सम्पूर्ण रूपमा भत्काएर लैजान सोही निर्माण कम्पनीलाई मात्र १ लाख रुपियाँमा जिम्मा दिइएको थियो । तर, बालुवाटारमा रहेको पुरानो राणाकालीन भवन भने आठ करोड रुपैयाँमा भत्काएर लैजान टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, कार्यालय सञ्चालनमा रहेका अरू भवनहरू भत्काउनैपर्ने अवस्थामा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा किन भत्काउन दिइएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । ती भवनहरू भत्काउन दिएको भए करिब १० करोडमा ठेक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, समानान्तर जेभीलाई एक लाखमा मात्र भत्काउन दिँदा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।